Ireo dia mety ho sasany amin'ireo Emojis vaovao ho an'ny fitaovana iOS | Vaovao IPhone
Ny emojis vaovao ho an'ny fitaovana iOS an'ny Apple dia saika vonona hanampy ireo lisitra lava misy. Tokony ho tsaroana fa ny Consortium tokana izay miasa amin'ny fanavaozana emoji 14 ary toa manana tarehy vaovao manana endrika miarahaba amin'ny fomban'ny miaramila isika, molotra manaikitra, Troll, miboiboika, tarehy miempo sns ...
Mazava ho azy fa ny emojis dia efa ampahany amin'ny andavan'andro antsika ary ny EmojiPedia dia efa manana antsipirihany sasany momba ny fomba ho emoji vaovao hanomboka vetivety ho an'ny fitaovana rehetrana avy any Apple izy ireo na tsia. Amin'io lafiny io, izy rehetra dia manampy tononkira hafa toy ny ankehitriny ary mahita vaovao isika toy ny haran-dranomasina, voninkazo lotus, akany tsy misy, akany misy atody, tsaramaso, ranoka raraka, tavoahangy, filalaovana slide, kodia, buoy. peratra, ny baolina fitaratra mahazatra, batterie ambany, crutches, taratra x, bubble ary maro hafa.
Raha ny lojika dia manomboka amin'ny maodely iray ihany ianao ary avy eo mampifanaraka sy mampifanaraka azy ireo ny orinasa tsirairay amin'izay tianao. Apple, ohatra, mazàna mampiasa endrika boribory sy mahafinaritra kokoa ho an'ireo Emojis ireo. Ny orinasa Cupertino dia mety tsy manampy an'io Emojis vaovao io raha tsy amin'ny taona ho avy., saingy tsy fantatra izany satria indraindray manavao azy ireo na mamoaka vaovao tsy ampoizina ary tsy miandry fanavaozana ny rafitry ny fandidiana na ny toa azy.
Avelanay ho anao ny rohy mankany amin'ny Emojipedia raha sanatria ka mahita ireo emoji rehetra nampiana ireo ianao mivantana avy amin'ny bilaogy ofisialy. Ny Andro manerantany Emoji dia ny 17 Jolay ho avy izao ary indraindray dia nasehon'i Apple anay ny sasany amin'ireo kasin'izy ireo hanampiana emoji. Ny farany dia nanisy emoji vaovao i Apple tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny fanavaozana ny iOS 14.5, saingy tsy ilaina ny manova ny rafitra fiasa hampiasana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Ity dia ho sasany amin'ireo Emojis vaovao ho an'ny fitaovana iOS
Ny iPhone 13 dia hampiditra ny fenitra WI-FI 6E vaovao